धेरै दिनपछि आज काठमाण्डौमा सवारीसाधन, पसल र क्याफेहरु खुले, सर्वसाधारण घरबाहिर निस्के ! – Sidha Onlinepatra
यो घोडा कारभित्र कसरी पस्यो? रोचक भिडियो हेर्नुहोस्
अहिले यस्ती भईन अनिता आफै हिड्डुल गर्न र खान सक्छिन , भगवान जस्ता श्रीमानको माया पाएर कसैले पनि नसोचेको चमत्कार भयो अनिता जिबनमा- हेर्नुहोस पुरा भिडियोमा
आमालाई बस चढाएर फर्केकी छोरीको त्यहीँ बसले किचेर मृत्यु
मोडल निशा घिमिरेको जिवनमा फर्कियो खुसी, ह्वील चेयरमा बस्ने भइन
यी अभिनेत्रीले २ करोड दिदापनि किन गरिनन् मेकअप ? यस्तो छ कारण (तस्बिरसहित)
निशेषाज्ञा खुकुलो भयो भनेर काठमाडौ आउँदै हुनुहुन्छ ? यस्ता कागजात नल्याए प्रवेश पाइन्न
सवारी लाइसेन्ससम्बन्धी सेवा आज देखि सुचारु हुने, यस्तो छ सूचना
तपाईंको जस्तै सोच सबैको भयो भने जातीय विभेदको अन्त्य हैन, जातीय लडाइँ सुरु हुन्छ !
मुख्य पृष्ठ /News/धेरै दिनपछि आज काठमाण्डौमा सवारीसाधन, पसल र क्याफेहरु खुले, सर्वसाधारण घरबाहिर निस्के !
धेरै दिनपछि आज काठमाण्डौमा सवारीसाधन, पसल र क्याफेहरु खुले, सर्वसाधारण घरबाहिर निस्के !
9122minutes read
सरकारी कार्यालय, बैंक, कृषि, उद्योग तथा कलकारखाना खुल्न थालेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा चहलपहल बढेको छ । उपत्यकाका मुख्य र भित्री सडकमा मानिसको भीड बढेको छ भने अत्यावश्यकबाहेकका सामग्री पसलसमेत खुलेका छन् ।
सरकारले विभिन्न कार्यालय र उद्योग खोल्ने निर्णयका कारण चहलपहल बढ्नु स्वाभाविक भए पनि कतिपयले उपत्यकामा ‘लकडाउन’ खुकुलो भएको भन्ने बुझाइका कारण काम नपरी पनि घर बाहिर निस्कन थालेको पाइन्छ । पहिले बिहान, साँझ मात्रै खुल्ने खाद्यान्नको पसल जुनसुकै समय खोल्ने प्रशासनको निर्णयका कारण पनि उपत्यकाका विभिन्न भागमा दिनभरजसो मानिसको आवतजावत देखिएको छ । कतिपयले सवारी साधन बाक्लो हुँदा सडकमा जाँच हुँदैन भनेर पनि निस्केको पाइएको छ ।
कतिपय व्यक्ति अब त लकडाउन खुकुलो छ भन्दै घुम्न निस्केको पनि भेटियो । सीमित क्षेत्रमा मात्रै खुकुलो बनाइए पनि धेरैमा पहिले जस्तै पालना गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएको वा थाहा भए पनि प्रहरी कम परिचालन हुन्छन् भन्ने सोचेर बाहिर निस्केको पाइएको छ । उपत्यकामा निर्माणका लागि आवश्यक हार्डवेयर पसल खुल्ने भनिए पनि कतिपय स्थानमा चिया पसल, क्याफे, कस्मेटिक्सलगायत पसलसमेत खुलेको देखिन्थ्यो ।
नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले भने कार्यालय र उद्योग खुलेपछि आवतजावत बढ्नु स्वाभाविक भएको बताएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता (प्रहरी उपरीक्षक) जीवन श्रेष्ठले चहलपहल बढ्दा सवारी पासको दुरुप्रयोग बढ्न सक्ने भएकाले जाँच बढाइएको बताउनुभयो । लकडाउनको शुरुको साताभन्दा पछिल्लो समय पासको दुरुप्रयोग बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो । ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न स्थानमा जाँच पनि बढाएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पहिलेभन्दा जाँच अझ कडाइ गरिरहेका छौँ ।”
आइतबार दिउँसोसम्म सवारी पासको दुरुपयोग गर्ने चार पाङ्ग्रे १०२ र दुई पाङ्ग्रे ४५८ गरी ५६० सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरेको छ । दैनिक ७०० देखि ८०० सम्म सवारी साधन कारवाहीमा परिरहेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले खुलेका कार्यालयमा जनशक्ति र सवारी साधनको प्रयोग सहीरुपमा भइरहेको छ/छैन भनी नियमनको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई दिइएको छ । त्यससँगै ट्राफिक प्रहरीले पनि जाँच गरिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “गल्ती भेटिँदा कारवाही पनि भइरहेको छ ।”
उपत्यकामा भीडभाड हुन नदिन कस्ता सवारी साधन कुन समयमा चल्न दिने भनी समय निर्धारण गरिएको छ । विकास निर्माणसम्बन्धी सामग्री बोकेका हेभी सवारी राति ८ः०० देखि बिहान ६ः०० बजेसम्म चल्न पाउने छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गाडी बिहान ९ः०० देखि १९ः३० सम्म तथा बेलुका ३ः३० देखि ५ः०० बजेसम्म चल्न पाउने महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले जानकारी दिएको छ ।
उपत्यकाका चक्रपथ बाहिरका क्षेत्रमा भने पहिलेदेखि नै लकडाउनको समयमा समेत अत्यावश्यकबाहेकका पसल खुल्ने गरेकामा अहिले त्यो अझै बढेको छ । अत्यावश्यकबाहेकका पसल खुल्दा ती स्थानमा जुनसुकै समयमा मानिसको आवतजावत देखिन्छ । काँठ क्षेत्रमा प्रहरीको उपस्थिति कम हुँदा मानिस छोटो दूरीमा सवारी साधनको प्रयोग गरिरहेका छन् । यस क्षेत्रमा बिहान र साँझको समयमा घुम्न निस्कनेको भीड देख्न सकिन्छ । धेरै ठाउँमा चाडपर्वको समयमा जस्तै समूहमा बसेर खेल खेल्ने गरेको देखिन्छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीले अहिले खुल्ला भएका विभिन्न कार्यालय र निर्माण क्षेत्रका कारण चहलपहल बढ्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार खाद्यान्न र औषधिका पसल पहिले निश्चित समयमात्रै खुल्ने भए पनि अहिले दिनभर खुल्दा पनि मानिसहरु सडकमा बढी देखिएका छन् । लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई भने कारवाही भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले यसलाई अझै कडाइ गरिएको छ ।”
भारतमा ब्राजिलवाट आयो नयाँ भेरियन्ट, ७ दिनमै तौल घटेर आधा बनाउँछ
फेरि आयो यस्तो निर्णय : दुई हप्ताका लागि यातायात सेवा पूर्ण रुपमा बन्द
मेरी आमा बाँचेको भए आज रानी बनाएर राख्ने थिए, आमाले मृत्युको मुखमा पुग्दा अन्तिममा यस्तो भन्नुभएको रहेछ जुन सम्झेर धरधरी रोइन नायिका निता ढुंगाना – (भिडियो)
आमाको जन्मदिनमा साम्राज्ञी: छोरी भन्दा कम सुन्दरी छैनन् आमा नेहा (तस्विर सहित)
चीनले बनाएको कोरोनाविरुद्धको खोप सोचेभन्दा चाँडै आउन सक्ने